Maxaa ka soo baxay baaritaankii Korona Fayras ee lagu sameeyey Macallinka Kooxda AC Milan, Stefano Pioli? – Gool FM
(Milan) 02 Dis 2020. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa bayaan ka soo saartay baaritaankii ku aaddanaa Korona Fayras ee lagu sameeyey macallinkooda Stefano Pioli.
Macallinka Kooxda AC Milan ee Stefano Pioli ayaa laga waayey Korona Fayras kaddib baaritaankii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey, waxaana uu kooxda dib ugu soo laaban doonaa kulanka ay habeen dambe ka horjeedaan naadiga Celtic.
Hoggaamiyeyaasha horyaalka Serie A ayaa dib u helaya macallinkooda, waxaana wehlinaya kaaliyihiisa Giacomo Murelli, kaasoo isna ka soo kabtay KOOFID 19.
“AC Milan waa ay ku dhawaaqaysaa in Tababare Stefano Pioli iyo ku xigeenkiisa Giacomo Murelli laga waayey Korona Fayras, kaddib tijaabo ku saabsan caabuqan oo shalay laga qaaday” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay kooxda AC Milan.
“Pioli iyo Murelli ayaa tababari doona kooxda tababarka maanta, waxayna kursiga keydka fariisan doonaan markale habeen dambe kulanka Europa League ee dhexmari doona Milan iyo Celtic.”
Daniele Bonera ayaa kooxda maamulayay kulammadii ay ciyaartay tan iyo markii Pioli iyo Murelli laga helay Korona Fayras.